Kukhulu ukubaluleka nezindlela zokusebenzisa isikhathi - Bayede News
Ukubaluleka kwesikhathi kuyinto enganakekile kwabaningi, ikakhulu kubantu abasha.
Kulula kwabaningi ukudlala ngethuba nesikhathi abanikwe sona. Abaningi bagcina ngokukhuluma ngokubaluleka kwaso kodwa abazi ukuthi kungani sibalulekile. Babodwa abakhala ngokuthi amaphupho abo awafezeki ngenxa yokuthi abanaso isikhathi, okungikhanyisela kabanzi ngokwehluleka kwabo ukwazi ukuthi isikhathi siyini, sibaluleke ngani futhi sisentsheziswa kanjani ngendlela efanele. Okubuhlungu iningi labantu abahlulwa ukusebenzisa isikhathi banalo iwashi ezihlakaleni zabo futhi abanye banabomakhalekhukwini abanaso isikhathi.
Okusho ukuthi akekho umuntu ongakhala ngokuthi akasazi isikhathi. Abagqugquzeli abaningi bahlezi begcizelela ukubaluleka kwesikhathi kodwa bangasho ukuthi isikhathi sisentsheziswa kanjani. Isikhathi sifana nokuthinta amanzi ageleza emfuleni. Lawo oke wawathinta awusoze uphinde uwathinte.
Isikhathi osichithile sifana namanzi achithekile, ngeke usawabutha. Lokhu kusho ukuthi uma unikwe ithuba lisebenzise ngoba ngeke usaphinde ulithole. Njengoba unikwe isikhathi sokuphila lapha emhlabeni kusho ukuthi kumele wenzisise lokho owawudalelwe kona. Uma unikwe ithuba lokufunda, udinga ukuthi ulisebenzise ngoba liyedlula futhi labo abangenalo kubazwisa ubuhlungu ukukubona udlala ngalo.
Engifisa ukukuveza lapha ukuthi isikhathi sibaluleke ukwedlula yonke into ngoba yonke into ikhona ngokuthi kube khona umuntu obone ukubaluleka kwesikhathi ngesikhathi enze into. Ubungeke ulifunde leli phephandaba kanye nalesi siqephu ukube angikubonanga ukubaluleka kokuthatha isikhathi ngisibhale.
Uma ungena esitolo ufica kunesinkwa, sikhona ngoba ukhona othathe isikhathi wasenza leso sinkwa. Lokhu kusho ukuthi uma uthenga isinkwa usuke ukhokhela isikhathi salona osenzile.
Kungakho abantu abazi ukubaluleka kwesikhathi kanye nethuba onikwe lona benemali eningi futhi bephila kahle. Ngangicabanga ukuthi ubaba uyasihlukumeza uma esishayela ukuthi asazi ukuthi kumele senzeni uma
sivuka. Ngangingazi ukuthi usifundisa isifundo sokuqala ngokusentsheziswa kwesikhathi. Wayeqonde ukusifundisa ukuthi uma ufunda ukusebenzisa isikhathi ngendlela efanele kumele uhlele usuku lwakusasa namuhla.
Lokhu kusho ukuthi kumele wazi ukuthi uzobe wenzani kusasa ngaphambi kokuthi ulale. Ngikubone sengimdala ukuthi ukuhlela usuku lwakho lwakusasa namuhla kwenza impilo yakho ihleleke futhi nesikhathi sakho singasebenziseki noma kanjani. Ukungahleli usuku nosuku kwenza ukuthi impilo yakho ingabi nenjongo ethize. Inxenye eyenza ukukhuthalele ukuvuka ukuthi uyazi ukuthi uvukelani.
Ngiye ngithi akhekho umuntu ongakwazi ukuvuka ekuseni, inkinga ukuthi abantu abaningi abanaso isizathu sokuvuka ekuseni. Ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuvuka ukubona ngenkathi uthola umsebenzi, sekumele uvuke uye emsebenzini. Awube usavuswa ngumuntu ukuthi uye emsebenzini kodwa kuyazenzakalela ngoba usuke usunaso isizathu sokuvuka.
Enye yezindlela zokusebenzisa isikhathi sakho ngendlela ukungagcini ekwazini ukuthi yini okumele uyenze uma uvuka kodwa kumele ubhale phansi izinto okumele uzenze futhi ubhale nesikhathi okumele uzenze ngaso. Okubalulekile akusikho ukubhala kuphela kodwa ukwenza zonke izinto othe uzozenza.
Zama ukususa yonke into ekudlela isikhathi okufaka phakathi izinkundla zokuxhumana. Abantu bakithi bayakwazi ukwenza izinto zenzeke futhi banawo amandla okusebenza kanzima kodwa ukungazibophezeli kulokhu abathe bazokwenza kubenza bangabonakali ukuthi benzani.
Uma ufisa ukusebenzisa isikhathi sakho ngendlela, zama ngakho konke okusemandleni akho ukuthi usihloniphe. Ukuhlonipha isikhathi kuqala ekutheni ufike ngesikhathi noma ngabe kumuphi umhlangano. Ukuzimisela akuqali ngenkathi kukhona umuntu okubonayo futhi nozokushayela izindla kodwa kuqala ngokwethembeka kungekho umuntu okubonayo. Hlonipha isikhathi noma kungekho ozokushayela izandla ukuthi usihloniphile. IsiZulu sithi isijwayezo siyayihlula ingqondo, okusho ukuthi ukuhlonipha isikhathi kuyangenana. Kuzokusiza ukuthi usondelane nabantu abasaziyo ukuthi isikhathi sibaluleke ngani futhi nabasihloniphayo.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi imiphumela yakho yalo nyaka incike kakhulu ekusebenziseni isikhathi sakho ngendlela ekuyisa phambili. Kulula ukuthi unyaka uphele ungazi nokuthi wenzeni ngoba isikhathi kuwe asibalulekile futhi awusazi nokuthi esani. Okusho ukuthi sizoqhubeka kakhulu isimo sempilo obhekene naso uma ungazimisele ngokushitsha.
nguSanele Gamede Apr 2, 2021